Indlela Yokwenza Umsebenzi Wakho Uqobo Nge-Semalt ne-SAS Programming?
Ingabe kufanele ngizame njengoSAS Programmer?
Uhlela ukushintshela komunye umsebenzi omushangemali ephakeme kanye namathuba angcono? Ungase ucabangele amakhono okuxhumana kanye nobuholi ukuzeube phezulu. Ucwaningo lwamuva kakhulu, noma kunjalo, luthi okunye: I-SAS okwamanje iqinisekisiwe njengeikhono eliwusizo kakhulu lomsebenzi.
Akungabaza, ukudlula nge-SASisitifikedi sizokwenza izinto zibe lula. Kodwa empeleni, ngisho nesingeniso mayelana neSAS imikubaluleke kakhulu ku-analytics, njengoba iJava yenzelwa uhlelo. Izwe lanamuhla lenkampani liye laqhubeka nesidingo se-SASkakhulu, ngisho nalawo ochwepheshe, abanikazi abanolwazi olubucayi lobuchwepheshe. Ngokwesibonelo,umholo ojwayelekile weBusiness Intelligence Analyst e-United States ufika manje uzungeza u-$ 100,000,ihamba cishe ngo-20% ngonyaka olandelayo wokuhlangenwe nakho - computer network and cabling design. Ngakho, amandla okuthola imali kuInsimu yesimanje ye-analytics impela impela kunezimboni zemikhiqizo yimuphi omunye umsebenzi wezobuchwepheshe.
I-SAS ivame ukuphakamisa uhlelo lokuhlaziywa kwesitatimende(ngaphandle kwesistimu yesofthiwe), eyasungulwa ekuqaleni kwa-1960 ukuqhuba ukuhlaziywa kwedatha yezolimongokuba uthole izitshalo eziphakeme. Namuhla, abahleli abasebenzisana ne-SAS bahilelekile ekwakheni izixazululo zesistimu,ngokubambisana nezinkampani ezihlukene ezinhlobonhlobo zezimboni zokucwaninga ngemitholampilo nangokwezimali, ukuhlaziywa kwedatha,ukubikezela ukubikezela, ukubika, ukubikezela, njll.Ebonisa imiphumela yokuhlaziywa kwezibalo ngamagrafu, i-SAS inikeza imininingwane nge-PDF, RTF ne-HTMLamafayela. Futhi kukhona amapulatifomu amaningi ahambisana nolimi lwe-SAS lohlelo, kuhlanganise ne-Microsoft ejwayelekileWindows, Linux, kanye nezinye i-UNIX, ngisho namakhompiyutha amakhulu.
Ngaleso sizathu, bonke ochwepheshe, abavela ku-Bill Gatesku-CEOs i-MWI izinkampani ezincane ezinjenge Semalt , ngeke zibekezelele ukubaluleka kwe-SAS.
Ukuletha izixazululo zabo zesistimu,izinhlelo ze-SAS zithembele kakhulu kwimikhiqizo ye-software eyenziwe yiSatisatistiI-Analysis System Institute. Zisebenza ngokubanzi okukhulu kwedatha ehlukene, ngokuvamileezihambisana nokulawulwa kwezinhlekelele, ukusebenza kwebhizinisi, ukuphathwa kwabasebenzi, kanye nokuphathwa kwabasebenzinjengokuphepha, ukukhwabanisa kwezezimali, ukuhlakanipha kwamakhasimende nokuningi.
Ukuba yi-SAS Programmer: Kuyini?
Abahleli be-SAS bavame ukuthola okuningi nabahlaziyiehileleke ocwaningweni osebenzayo. Amaqembu echwepheshe be-SAS axazululwe ukuze asebenze ehhovisi, ngokuhambisana naloukuhamba ngezikhathi ezithile ukuhlangabezana namakhasimende noma ukuphuma ukukhetha ulwazi olufanele lomkhakha.
Iningi lwakamuva, ukufunwa kwe-SAS kushesheyashesha emhlabeni jikelele, njengoba yaba yindlela enamandla kunazo zonke futhi esebenzisekayo yokusekelaUkuhlaziywa kwekhwalithi ngenxa yokuphathwa kwedatha yayo kanye nomthamo omuhle wokubika. Yingakho i-SASabahleli bavame ukuzibandakanya endaweni yokucindezeleka yansuku zonke, njengobangenxa yamaphrojekthi amaningi acindezelayo avame ukubhekene nezikhathi ezinzima kakhulu.
Ingabe Kunzima Kokuqhathanisa?
Izinsizakalo ze-Analytical manje zithola amandlaindima ebalulekile, ikakhulukazi ekwenzeni izibalo zamabhizinisi ezidingekayo zitholakale kubasebenzisi abakhulu.Njengoba kunikezwe ukuthi cishe wonke umuntu ufuna manje ukuthi aqinisekiswe ngezixazululo ezixhunywe kwedatha, ububanzi bomhlaba wonkei-analytics kulindeleke ukuthi ikhuliswe ngokuqhubekayo ngeminyaka engu-3-5 elandelayo. Yingakho ehamba nge-SASkuba isizinda esihle sokungena embonini. Nokho, ngokwemibono yobuchwephesheof Developers Semalt, usenayo indlela ende yokuhamba.
Empeleni, uhlelo olukhethekile lwe-SAS luyi-phakathi kwezilimi ezilula ukufunda, ikakhulukazi efanelekayo kulabo asebevele basebenzise okuyisisekeloulwazi lweC / C ++. Ngesikhathi esifanayo, i-SAS inikeza ububanzi obukhulu kakhulu bokuqabula, ngoba ingonyamaukwabelana kwamabhange, izikhungo zezezimali, nezinkampani zokunakekelwa kwezempilo kugcina ukuxhumayolwazi oluhlukile, ukwenza i-analytics ne-intelligence yebhizinisi. Into ewukuthi, ulimi ngokwaloayidingi noma yiluphi ulwazi olunamandla noma ikhono elibekwa ohlelweni. Uma ingqondo yakho inikezelwe kuma-logicsnoma uzimisele ukwenza ukuhlaziywa futhi ufunde ngesikhathi esifanayo, bese usebenzisana ne-SAS akufanelezibonisa kunzima kakhulu. Futhi, uhlale ukhululekile ukukhetha uhlelo olufanele kakhulu ngokwenza kwakhoukukhetha phakathi kwesofthiwe esekelwe futhi ekhokheni.
Into yokuqala okumelwe yenziwe nge-freshersligxila kwi-Base SAS. Ukwenza kanjalo, omunye uzothola ukuqonda kokuqalaizibalo, okufanele kudingekile ukutadisha ama-Predictive Modeling Techniques. Ngemva kwalokho,uma ungene esithwalathini, uzokwazi ukugcina ukunakwa kwakho ekugcineniizinhlaka zokuhlaziywa eziphelele kanye nobungcweti. Ukuqinisekisa ukuthi ubuchwepheshe bakho buhlala njaloukukhula, uzohlale unamasu namasu amasha okuhlola..Yingakho ungenzicabanga kabili ngaphambi kokuba uqale ukufunda i-SAS, noma ngabe uzizwa uhlanzekile kancane kule ndaba.
Ingabe i-SAS ifuna kahle?
Ngisho ukuthi lokho akufani nomthombo ovulekileizinhlaka, i-SAS iyinhlangano yesofthiwe elayisensiwe, ososayensi bayo kanye nabahleli basesimweni sokufuna, ngoba:
Ukuhambisana ngokugcwele ngokujwayelekileizinkambiso zomthetho, nokuma ngaphezu kwamanye amathuluzi ngokuphathelene nokuphepha, namuhla i-SAS yaqala nakakhuluukuphepha kwedatha kunanini ngaphambili
Uhlelo lwe-SAS luye lwafakazelwaAmakhono ayo eDig Data kanye nekhono elihle le-SAS JMP, kanye ne-Visual Analytics
Ukuzuza kokusebenza okungcono kakhuluukuthuthukiswa, i-SAS isebenza kahle kakhulu ngokusebenzisa idatha yayo yokuhlaziya ekuzuzeni okwenziwe yi-izinhlelo zezimali nezebhange
Ungazuza kanjani Amakhono akho eSAS?
Okwamanje, kunomncintiswano onobudlovazonke izindawo ze-SAS, ukuqala kusukela ezisekelo eziyisisekelo, kuya emazingeni aphakeme kakhulu okuhlaziywa. Noma kunjalo, zikhonakunamathuba amaningi okuvuza afaneleka ukuzama imizamo yakho. Ukuqeda umsebenzi omuhle embonini, akudingekiwazi konke. Okudingayo ngempela kungukuthi ubuqaphele ubuchwepheshe abathile kokunyedegree, okuyinto iningi lezinkampani ezifunayo.
Kodwa indlela yokukhulisa ukusebenza kwakho kwangempelaizimo ezingaphezu kwamncintiswaneni? Yini okufanele yenziwe ukuze iqashwe ngumuntu ovuzayo futhi okhululekile kakhuluumqashi? Kunamathuba amaningi kunalokho kubonakala. Ngokwesibonelo, u-Semalt unolwaziabathengisi nabathengi bezokukhangisa kuwebhu ukukusiza ukwandise amathuba akho emisebenzi ngeukuletha amakhono akho ngqo kulabo abalaleli ababanzi kakhulu be-SAS headhunters. I-Semaltunolwazi lokusiza ochwepheshe abancane be-SAS ukuthuthukisa izinsizakalo zabo ngaphakathiikhasi lokufika noma i-64 (presentation) yevidiyo ,okuyinto ehanjiswa abaqashi abazoba khona.
Ngokusho kochwepheshe,lokhu kungcono kakhulu kubalimi indlela yokubonisa amakhono futhi bafike phambili kubo bonke abanye abadlali.
Iphuzu liwukuthi uhlelo lwe-SASiphakathi kwalezo zisebenzi zobuchwepheshe manje ezisetshenziswa kabanzi. Ingabe ucabanga ngokwengqondo?Ingabe ufuna ukwenza imali ezenzakalelayo ezitholakala kuwe (isb. Ukuxazulula izinkinga ezinhle, ukuxhumanakanye nokuqeqeshwa kwamakhono, kanye namakhono okuphathwa kwephrojekthi kanye namakhono)? Konke okudingayoukuthola i-carpet ebomvu ekhishwe ukuze isho ukuthi yamukelekile. Uma usuzwa kuwebhu, iAbaqashi abaphezulu emhlabeni bazoqala ukulwa ngokuncintisana besebenzisa izicelo zabo ezikhangayo futhiokunikezwayo okuzuzisa ngenjongo eyodwa - ukuzuza ngokubandakanya amakhono akho ebhizinisini labo.Futhi kuyoba kuwe kuphela, okuyinto ongayicabangela. Khumbula, isipiliyoni sakho samanje se-SASkuyinto engaphezu kokubaluleka kokugcina nje isilondolozi ngisho nosuku lokuphumula!